Taksi sy Taksibe eto an-drenivohitra Maro ireo efa tena ratsy sady tsy manara-dalàna
Betsaka amin’ireo fiarakaretsaka sy taksibe miasa eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin’izao no efa tena ratsy.
Fitarazohan’ny fanamboaran-dalana Mamofona ambadika politika
Nanomboka ny alarobia, alakamisy ary zoma teo dia saika nahenoana fahatapahan-dalana avokoa ireo lalam-pirenena malaza eto Madagasikara. Anisan’ny tena naresaka iny tapany andrefana sy avaratra atsinanana ary atsinanan’ny nosy iny.
Fasan'ny Karana Niverina nitokona indray ireo mpivarotra
Niverina nitokona indray ireo mpivarotra etsy amin'ny Fasan'ny Karana ny sabotsy teo.
RN6 Ambilobe – Ambanja Tapaka ny tetezana, mihotsaka ny arabe
Fampandrenesana ofisialy ny avy amin’ny minisiteran’ny asa vaventy fa tapaka ny lalam-pirenena faha-6 (RN6) eo anelanelan’Ambilobe sy Ambanja noho ny fahatapahana tetezana sy fihotsahan’ny lalana taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim.
OMAVET Ampasampito Hiasa tsy ho ela
Hiasa tsy ho ela ny OMAVET eny Ampasampito, hanara-maso ny toe-pahasalaman’ireo fiarakaretsaka sy taksibe mpitatitr’olona eto an-drenivohitra eny hatramin’ireo fiara tsotra ho fiarovana ny ain’ny mpandeha.
Sprinter nitrifana Olona 4 indray maty tany Tsiroanomandidy
Taksibrosy Sprinter iray hiainga avy any Tsiroanomandidy hiakatra Antananarivo no tra-doza omaly vao maraina tokony ho tamin’ny 2ora sy sasany. Mbola tsy tafavoaka ny tanàna akory fa vao niainga 800m miala ny toby fiantsonan’ny fiara,
Fandaminam-piantsonana eto Antananarivo Miha manara-dalàna ny mponina
Ny volana febroary 2016 no nanomboka nitantana ny fiantsonan’ireo fiara eto an-drenivohitra ny orinasa Easy park. Nifanarahana tamin’ny kaominin’Antananarivo (CUA) tamin’izany ny hampiasa teknolojia izay mbola vitsy eto Afrika ny mampiasa azy dia ny « Horodateur ».
Ny mba hahafahana mandamina sy mandrindra ny fiarahamonina no tanjona, indrindra taorian’ny saika nandoran’ny mponina ilay taksibe iray 172 teny an-toerana ny herinandro teo nefa efa nampiakatra saran-dalana 500 Ar. Telo avy hatrany no tratra nanary mpandeha an-dalana omaly zoma, ka nampidirina “fourrière” avy hatrany, tsy afaka miasa fa mijanona ao an-tokotanin’ny kaominina. Teny Tanjombato ny sasany tamin’izy ireo no tratra nanary mpandeha raha avy any amin’ny 67 ha, fihetsika efa fanaon’izy ireo hatramin’izay. Mbola hitohy ny hetsika saingy ny hany hangatahin’ny Ben’ny tanànan’Andoharanofotsy amin’ireo mponina ao aminy dia ny tsy hanimbana fananan’olona, satria efa tena mandray andraikitra feno izy ireo ankehitriny. Nohamafisin’ity Ben’ny tanàna ity moa fa na iza na iza ho avy hifampiraharaha amin’izy ireo mikasika ireo taksibe telo tratra tsy nanara-dalàna ireto, dia tsy hanaiky izy ireo. Mbola ho avy ihany koa ny anjaran’ireo taksibe mivondrona ao amin’ny kaoperativa hafa.